﻿FaceBook အကောင်. ကို Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ဖောက်မယ် ~ မိုးညိုသား
﻿FaceBook အကောင်. ကို Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ဖောက်မယ်
﻿FaceBook အကောင်. ကို Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ဖောက်မယ်.....
ကျွန်တော်လုပ်တာတော. 100% ရပါတယ်
Phone setting >>Manange Application>>Facebook
ကို ( clear data ) လုပ်ရပါမယ်
နော်တစ်ခုကတော. မိမိဖုန်းမှာ Browser နှစ်ခုရှိထားရပါမယ်
Send code တောင်းတဲ.အခါမှာ မိမိ Mail ထဲမှ Code နံပက်ကို
Mail ထဲမှာ တိုက်ရိုက် ပြုလုပ်လို.မရပါ
အောက်မှာ ပုံနဲ.တကွ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်
Facebook ရဲ့ နောက်ဆုံးဗားရှင်း 8.0.0.8 ကို ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ပါ
အဆင်မပြေရင် comment ပေးခဲ.ပါ
အဆင်ပြေခဲ.ရင်တော. Share လုပ်ပေးခြင်းဖြင်.ကူညီပါ
MMUG က အကိုဆရာတွေအားလုံးကို ကျေးဇူုးအထူးတင်ပါသည်
Credit to Soe Yeyint
မြန်မာပြည်သား/ သူ တွေ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Soe Yeyint